Afhayeenka AMISOM oo Xaqiijiyay In Ciidanka Kenya Laga Wareejin Doono Magaalada Kismaayo. – idalenews.com
Afhayeenka AMISOM oo Xaqiijiyay In Ciidanka Kenya Laga Wareejin Doono Magaalada Kismaayo.
Afhayeenka Howlgalka AMISOM Col. Cali Aadan Xumad ayaa markii u horeysay ka hadlay wararka sheegaya in Ciidamada Kenya laga bedeli doono Kismaayo, isla markaana laga wareejin doono mas’uuliyada amniga magaalada Kismaayo, wareysi uu siiyaya laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu Col, Cali Aada Xumad ku xaqiijiyay in Ciidamada Kenya laga saari doono magaalada, balse aanay ka bixi doonin howlgalka AMISOM, hase ahaatee la sameeyay dib u habeyn xaga ciidanka qorshihiisa ah.
“Ciidamada Kenya kama baxayaan AMISOM dib u habeyn xagga ciidanka qorshihiisa ayaa socda, Kismaayo ayaa laga saari doonaa kaliya, waxaa lagu wareejinayaa Ciidamada Sierra Leone iyo ciidamada Brundi, laakiin waxaa jiri doona qeyb yar oo ka mid ah ciidamada Kenya oo la howlgeli doona ciidamada Sierra Leone iyo kuwa Brundi “ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumad.
Col. Cali Aadan Xumad ayaa intaa ku daray in Ciidamada Kenya kaliya laga bedelay hogaanka qeybtii afaraad, isagoo xusay in qeybta Kismaayo labo loo qeybiyay kuwaas oo kala ah Sierra Leone iyo Brundi sida uu hadalka u dhigay.
Mar la weydiiyay sababta keentay in is bedeladaasi ay dhacaan ayuu sheegay in ciidamada Itoobiya ay ku soo biireen howlgalka AMISOM, isla markaana ciidamada Itoobiya ay la wareegeen qeybta Baydhabo oo ah qeybta saddexaad, isagoo tilmaamay in Ciidamada Uganda iyo kuwa Brundi ay kuwa Itoobiya kala wareegeen qeybtaas.
“Waxaa keenay is bedeladaas inay dhacaan waxaa ka dambeysay ciidanka Itoobiya oo Mas’uuliyada AMISOM soo hoos galay qeyb ayuu ka qaadtay isbedlka, waxayna hogaanka u heynayaan qeybta saddexaad, qeybta koowaad waa Muqdisho, qeybta labaad waa Labada Shabelle oo Ciidamada Brundi iyo Uganda ay hogaanka heynayaan, qeybta afaraad waa tan Hiiraan”ayuu yiri Afhayeenka Ciidamada AMISOM.
Col. Xumad ayaa sheegay in kaliya Mas’uuliyadaha la qeybsaday, isla markaana howlaha ay bilaabanayaan, waxaana uu cadeeyay in Ciidamada Brundi ay qeyb qeyb u tagi doonaan magaalada Kismaayo.
Dhinaca Afayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xaamud ayaa sheegey in ciidamadda Ethiopia ee kusoo biirey AMISOM ay tahay in ay ku dhaqmaan anshax-dhaqameedka nabad illaalinta, isagoo xusay in ciidamadda Ethiopia ay ku qasbanyihiin in aysan marnaba ka talaabin waxyaabaha xeerka iyo shuruucda ah, islamarkaasina aysan ku dhaqaaqin waxyaabo iyaga u gaar ah.
Maamulka Universal TV oo cambaareeyay tallaabada ay Somaliland ay qaadatay.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi balaaran oo Baydhaba ku wajahan